Anoraswa Meno maBhaibheri, Dental Kuisa Mapake - Vayu
Mazino Kudzidzisa Zvigadzirwa
Dhijitari Kudzidzisa Sisitimu
intra yemumuromo kamera
Chiremba wemazino Chitsiko
Compressor ine Dryer
Compressor neRunyararo bhokisi
Brushes & Yakagadzika Dombo
Kugadzira R & D
Gara uchipa Imwe-Mira-Solution gara uchisvika pairi
SHANGHAI JPS DENTAL CO., LTD yanga ichipa zvigadzirwa zvemazino kune vatengi vanobva munyika dzinopfuura makumi masere nematunhu. Zvigadzirwa zvedu zvikuru zvemazino midziyo yemazino yakadai sekuenzanisa kwemazino, chigaro chakaiswa chemazino, chinotakurika chemazino, mafuta emahara compressor uye autoclave, nezvimwe. Uye zvinoraswa zvemazino senge inodyara kit, mazino bhibhi, pepa repepa, nezvimwe.
Yedu CE uye ISO13485 yakaburitswa neTUV, Germany.
BHUSI RAKO RAKAVIMBIKA Partner IN CHINA
Wemazino Sachigaro JPSF600
Oiri-isina mweya compressor
isu kuraira kusarudza
JPS Dental inopa zvakavimbika zvigadzirwa uye One Stop Solution kune vese vatengi.
Makore anoda kusvika makumi maviri mubhizinesi rezvemazino nerekurapa
ISO 13485 yakasimbiswa uye zvinopfuura makumi matanhatu zvigadzirwa zvine CE
Vakapfuma vane ruzivo mumatarenda ehurumende
One Stop solution yekutenga zvakakwana
ichangoburwa nyaya zvidzidzo
JPS Dental Simulator
Yakakwira Yemhando Dental Kudzidzisa Simulator YeMazino Kudzidziswa
chii vanhu vanotaura
Vatengi veBritish vakati:
JPS Boka, vatengesi vedu vakavimbika kwazvo vezvinhu zvekumisa. Isu tinofadzwa nemhando yemasevhisi ako uye tinokoshesa kupindura kweJPS uye hunyanzvi mubhizinesi. JPS yakavimbika uye nekuda kweizvi, isu takakwanisa kuchengetedza vatengi vedu kugutsikana. Tichave takatarisira kune rakanakisa kuenderera bhizinesi hukama
Vatengi veSweden vakati:
Pakati pekupararira kwehutachiona hwehutachiona, kushungurudzika uye kutya kwakapfuura nenyika nekuda kwekushomeka kwemidziyo yekuzvidzivirira. JPS yakakwira uye yakaunzwa nemazvo uye nemhando. Munguva iyo zvinhu zvaiita sezvisingabviri, JPS yakaita kuti zvikwanisike. Kwatiri JPS ishamwari yeupenyu hwese!
Kubva pakagadzwa makore gumi nemana apfuura, JPS Dental yakazvipira kupa vatengi HUYE STOP SOLUTION yezvigadzirwa zvakavimbika izvo zvakawana mukurumbira unoshamisa muindasitiri yemazino uye vakawana kuvimba kwakakosha kubva kune vatengi kupota nyika.
JPS Boka rinopa zvigadzirwa zvakavimbika uye One Stop Solution kune vese vatengi.
© Copyright - 2021JPS: Kodzero dzose dzakachengetedzwa.